Takoorka – somali
Hadii aad qabto qaaxada sambabka waxa ay ku gudbikarta dadka kale. Sabataas aawadeed waxa marka hore lagugu daawayndoonaa qolka tagoorida ee cudurda hawada lagu kala qaado oo isbitaalka ku yaala. Ujeedada tagooridu waa in laga hortago faafida cudurka uu ku gudbaayo bukaanada kale iyo shaqaalaha isbitaalka.
Daawada tayadleh ayaa jooginaysa khatarta faafida intabadan mudo laba ilaa sedex todobaad gudahood. Waa waqtigaas ka lagugu tagoorayaa isbitaalka. Xaaldaha qaar tagooridu waxa ay qaadan kartaa mudo dheer.
Waqtiga tagoorka waxa aad ku jirtaa qol kelidaa aad tahay. Kama bixi kartid qolka amar la’aan. Waxa ku yaala musqusha iyo xamaam, telefoon iyo TV. Cuntada iyo daawada intaba qolka ayaa loguug keenayaa. Waxa kale oo u soo qaadankartaa waxa yaabo shaqsi ahaan aad u leeday sida joornaalo ama buugaag.
Shaqaalaha ku daawaynayaa waxa ay xidhan yihiin qalabka lagu neefsado. Dadka waawayni way ku soo siyaaran karaan, laakiin waa in ay raacaan talada ay siiyaan shaqaalaha caafimaadku aynay isticmaalaan qalabka neefsiga. Waxa lagu talinayaa in siyaarshada la soo gaabiyo waqtiga ay bilowga daawada. Hadii ay suurgta gal tahay ehelaaga waxa aad kala xidhiidhi kartaa dariiqa internetka ehelaaga iyo saxiibadaada.
Caruurta 5 sano ka yar iyo dada waa wayne ee dhifaacooga jidhku daciif yahay ma siyaaran karaan waqtiga tagoorka. Hadii aad qabto xanuunka qaaxada ee adgaysiga u leh daawooyinka siyaarshada dadka da’doodu ay ka yartayo 16 sano waa mamnuuc.
Hadii aad qufacdo waxa aad hawada ku daraysaa bakterida qaaxada. Marka aad qufacayso fadlan afkaaga iyo sankaagaba ku dabool maro ama kilinigs. Ka dibaan ku rid salada qashinka. Hadii aad u baahantay in aad ka baxado qolka waqtiga takoorka isticmaal maaska wajiga, hadaada qufacdan gaacantaad u dhig.